Madaxweyne Farmaajo oo Magacaabaya Guddi dabagala Mashaariicdii uu soo dhagax dhigay | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Farmaajo oo Magacaabaya Guddi dabagala Mashaariicdii uu soo dhagax dhigay
MUQDISHO – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in uu sameyn doono Guddi ka shaqeyn doona dabagalka fulinta mashaariicda horumarineed ee uu ka dhagax dhigay deegaanadii uu socdaalka kusoo maray.
Madaxweyne Farmaajo oo warbaahinta kula hadlay Xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay socdaalkii Nabadda iyo dib u heshisiinta,waxa uu sheegay in Guddigu si dhow ula socon doono dhameystirka fulinta mashaariicdii uu dhagax dhigay.
Maalmaha soo socda waxaan magacaabayaa guddi dabagal ku sameeya mashaariicdii aan soo ballan qaadey, si aan ula soconno dhaqan galkooda. Dowladda waxaa ka go’an in ay kaalinteeda ka qaadato” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo qurbajoogta Soomaaliyeed in ay kaalin ka qaataan dib u dhiska iyo horumatinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Waxaan ugu baaqayaa ganacsatada iyo qurba joogta Soomaaliyeed in ay ka qeyb qaataan mashaariicda horumarineed iyo dib u dhiska dalkooda..”ayuu yiri Farmaajo
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay shacabka sida wadaniyada leh usoo dhaweeyey isaga iyo waftigiisa.
Waxa uu soo dhaweynta ku tilmaamay mid ka turjumeysa biseylka iyo hanka ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed dowladnimada iyo wadajirka.
Madaxweynaha ayaa ku bogaafiyay Madaxda Dowlad hoboleedyada Puntland iyo Valmudug dadaalka ay ugu jiraan hofumatinta,xasilinta,nabadeynta iyo dib u heshisiinta bulshada ku dhaqan deegaanadaas.
Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyey Madaxda Dowlad Goboleedyada Puntlaland iuo Galmudug dadaalka ay ugu jiraan nabadeynta,xasilinta iuo wadajirka deegaanadaas.
Madaxweyne Farmaajo ayaa socdaal qaatay muddo 17 maalmood ah waxa uu ku maray gobolada Nugaal,Bari iyo Galgaduud halkaasoo uu ugu guuragalayaybaahiyaha nololeed ee dadka iyo arrimaha dib u heshiinta.